Ku rakib Joomla 3.0.x server-ka Ubuntu. | Laga soo bilaabo Linux
krel | | GNU / Linux, Noticias, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Joomla waa CMS caan ah oo noo oggolaanaya inaan abuurno oo naqshadeynno bogag internet oo firfircoon iyada oo aan loo baahnayn in la ogaado luqad kasta oo barnaamij ama naqshad websaydh ah Dhamaadka Sebtember nooca 3.0 ayaa la sii daayay waana inaan qiraa tan iyo markii 2.5 (LTS) boodka uu ahaa mid muhiim ah, badanaa muuqaalka.
Ujeeddada casharradan ayaa ah in adduunyada naqshadeynta wejiga la dhigo meel qof walba gaari karo. Fikradda ayaa ah inaad sameysan kartid adeegaha LAMP oo aad ku maamuli karto bog Joomla ah. Ahaanshaha hab fiican oo lagu tababaro isticmaalka CMS-kan.
Haddii aad raaci doontid casharradu sidii wax la taaban karo oo kale si aad u soo gasho adduunka ka mid ah serverka shabakadda iyo Joomla waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho mashiin casri ah. Waxaan sidoo kale rajeynayaa inay waxtar u leedahay dhammaan kuwa, in kasta oo horey u ogaa Joomla, ay u adeegeen cusbooneysiin ama weydiin.
Nooca nidaamka server-ka ee loo yaqaan 'priori' waa mid aan dan ka lahayn, illaa iyo inta ay tixgelinayaan qaabdhismeedka qaabdhismeedka faylalka marka loo eego Ubuntu / Debian. Xaaladdayda, waxaan isticmaali doonaa Ubuntu Server 12.04.1 LTS, way fududahay in la rakibo oo wuxuu leeyahay waxqabad aad u wanaagsan, waxaan kuu sheegayaa, nidaamku waa midka aad jeceshahay, laakiin casharka ayaa loogu talagalay Ubuntu. Dhinaca kale, maqnaanshaha domain waxaan isticmaali doonaa cinwaanada IP.
Aynu ka hadalno Joomla. Si aad ugu dhajiso bog Joomla waxaad u baahan tahay inaad sameyso 4 talaabo guud:
Awoodi websaydhka martigelinta ama martigelinta (haddii aan leenahay domain ka wanaagsan)
U samee xog-ururin Joomla, MySQL (doorbidayaa)
Ku martigelinta Joomla server-ka.
Ka rakibo rakibayaha biraawsarka si aad u rakibto oo aad u habayso CMS-ga.
Guud ahaan, waa wax aasaasi ah oo caadi ah, hase yeeshe sida loo sii wado waxay ku xirnaan doontaa qeexitaankeena. Xaaladdeenna ma haysan doonno cPanels-ka caanka ah ee ay bixiyaan bixiyeyaasha martigeliya laakiin uma baahni doonno midkoodna, mana isticmaali doono XAMPP maxaa yeelay waxay si dheeri ah u dheereyn doontaa casharrada.
Awoodi websaydhka martigelinta ama martigelinta
Markaan ku rakibno Ubuntu Server ujeedkan, waxa caadiga ah waa inta lagu guda jiro rakibidda waxaan si toos ah ugu darnaa server LAMP iyo mid kale oo loo yaqaan 'SSSS' (way noo fiicnaan laheyd). Si kastaba ha noqotee, waxaan ka bilaabayaa fikradda ah inaan kaliya haysanno nidaam aasaasi ah ama nooca desktop-ka ah oo la heli karo, sidaa darteed ma aanan haysan lahayn qalab furan.
Waa maxay habka ugu fudud ee LAMP loogu rakibo Ubuntu Server?
Waxaa jira barnaamij la yiraahdo taskel kaas oo la fuliyo inta lagu gudajiro hawsha rakibida waxayna noo ogolaaneysaa inaan rakibno kooxo dhameystiran oo xirmooyin ah shaqooyinka qaarkood, si loo fuliyo waxaan kaliya ubaahanahay amarka soo socda. Waxay la mid tahay amarrada Yum ee xoogga leh ee ka socda groupinstall.
Tani waa inay noo muuqataa:
Qaabka loo adeegsado waa sidan soo socota: Fallaadhaha fureyaasha waxaan u dhaqaaqeynaa hoos-hoos, Furaha 'SPACE' waxaan ku dhejineynaa asteristics si aan u xulano, iyadoo TAB aan u boodno halka ay ku qoran tahay AQBAL iyo ENTER aan ku xaqiijinno. Si aad uga baxdo isbadal la'aanta ESC.
Marka la aqbalo, waxay qabataa dhammaan nidaamka rakibidda.
Inta lagu guda jiro rakibidda LAMP waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku qorto eray sir ah koontada "root" ee keydka xogta mysql, waxaa muhiim ah inaad xasuusato erayga sirta ah maadaama aan gadaal ugu baahan doonno inta lagu jiro rakibidda phpmyadmin.
Waqtigan xaadirka ah waxaan horeyba u dhameystirnay tallaabo muhiim ah, oo aan ku rakibey server-ka Apache.
Si aad u hubiso inay shaqeyneyso, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku qorto cinwaanka IP-ka ee server-ka baalka biraawsarka waxaadna arki doontaa tan:
Xaaladdayda waxay ahayd 192.168.1.9, haddii aysan garanayn waxaaga, kaliya bilow ifconfig oo fiiri is-dhexgalka (eth0, eth1, iwm) halka ay ku qoran tahay addr: xxxx
Sidoo kale, markaan bilowno Ubuntu Server way na tusaysaa.
Sida ugu fudud ee taas, waxaan horeyba u soo gabagabeynay Tallaabada 1 waxaanan leenahay marti-geliye websaydh ah oo ku shaqeeya cinwaanka IP-gaas.
Haddii ay dhacdo inaad ka shaqeyneyso goobta serverka, waa inaad ku dhejisaa 127.0.0.1 ama localhost isla biraawsarka.
Abuur database MySQL Joomla
Tan waxaan u isticmaalay PhpMyAdmin.
# apt-hel rakibida phpmyadmin
Inta lagu guda jiro rakibida waxaad na weydiin doontaa xoogaa su'aalo ah.
Midka koowaad. Muxuu yahay adeegaha aan u dooneyno? Xaaladdeenna waxaa loogu talagalay Apache taasina waa sida saxda ah waa inaan ka jawaabno.
Waxaan ku calaamadeyneynaa SPACE gudaha Apache2 (eeg astaanta). TAB ahaan waxaan ugu boodnay ACCEPT iyo ENTER waxaan ku xaqiijinaynaa.
Markaas sanduuqan ayaa soo muuqan doona maadaama aynaan ahayn maamuleyaal horumarsan waxaan ku koobeynaa sumadeynta Haa.
Hadda waxay na weydiin doontaa lambarka sirta isticmaalaha 'MySQL root', kaas oo aan horey ugu adkaystay inaad xusuusato intii lagu jiray rakibidda LAMP (tallaabada 1)
Waan qoreynaa, la bood TAB si AQBALO oo u sii wad.
Kaliya waa inaan u qoondeeynaa erayga sirta ah isticmaaleha phpmyadmin, maahan inuu la mid noqdo kii hore. Xaqiiqdii, haddii aad si taxaddar leh u akhrido xitaa looma baahna.
Waan aqbalnaa oo haddii wax waliba si fiican udhaceen waa inaan shaqeynaa.
Waxaan ku qoreynaa baarka biraawsarka: Server_IP / phpmyadmin, kiiskeyga hadaad xasuusato waxay noqoneysaa 192.168.1.9/phpmyadmin waxayna kuu jiheyn doontaa foomka soo galida phpmyadmin.
Waad ku soo gali kartaa asal ahaan adeegsade MySQL lambarka sirta ah ee caanka ah ee ay tahay inaadan iloobin ama isticmaalaha phpmyadmin ee MySQL.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa fiican inaad doorato xididka maxaa yeelay waa lama huraan inaad yeelato mudnaanta aasaasiga si aad ugu sameysid keyd Joomla.
Gudaha phpmyadmin waxay u egtahay sidan:
Waxaan hadda dooneynaa inaan sameyno keydka macluumaadka. Nidaamka ugu fudud ayaa ah in la abuuro isticmaale leh keyd kuu gaar ah. Xuquuqda, hoosta waxaan ku darnaa isticmaale cusub:
Fiiro gaar ah u yeelo sida aan ugu buuxiyay foomka isticmaale la magacaabay j3, waxaa loo kala saaray laba sawir.
Tusaalaha, isticmaale la magacaabay j3 oo leh keyd xog ururin ah oo isku magac ah iyo dhammaan mudnaanta dul saaran. Haddii wax waliba si fiican u socdeen, liiska isticmaalaha waa inay lahaadaan rikoor sidan oo kale ah:
Hagaag, horey ayaan u dhameystirnay Tallaabada 2, u samee isticmaale iyo xog-ururin mysql joomla.
3. Ku marti geli Joomla server-ka.
Waxaan u dhaqaaqeynaa galka / var / www / in aan in yar ka shaqeyno halkaas. Haddii qof uusan garanayn, marka loo eego taasi waa diiwaanka dadweynaha ee Apache iyo aragtida biraawsarka waa aasaaska shabakadda
Hadda waxaan abuuri doonaa tusaha martigelinta joomla.
Gabi ahaanba waa ansax in lagu rakibo Joomla xididka webka, taasi waa, laga soo bilaabo nidaamka aragtida /kala duwan / www (default). A priori maahan wax aad muhiim u ah maadaama xididka webka lagu dhaqaajin karo tafatir / iwm / apache2 / site-heli karo / default. Isticmaalaha caadaystay inuu la shaqeeyo server-yada, tani waa inay u muuqataa mid soo noqnoqonaysa, laakiin maadaama aanan garanayn cidda xiisayn karta qodobkan, waxaa waajib igu ah inaan sharaxo faahfaahinta qaar. Casharradan waxaan ku rakibi doonaa galka hal talaabo ka hooseeya / var / www /, saameynta degdega ah ee tan sida ku cad aragtida biraawsarka ayaa ah in bogga laga heli doono: Server_IP / joomla_directory /.Haddii lagu rakibi lahaa galka guud ee dadweynaha, kaliya adoo gelinaya cinwaanka IP-ga ama cinwaanka waxaan geli doonnaa bogga. Laakiin mar hore ayaan kuu sheegayaa, waad rakibi kartaa joomla meel kasta oo aad rabto ka dibna markaa haddii aad rabto inay ku jirto xididka webka iyo in kale, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad wax ka beddelka ku habboon ku sameyso apache si ay ugu wareejiso xididkeeda martida ah galka aad tilmaamayso
Soo koobid, kiiskeena qaaska ah Joomla wuxuu ku jiri doonaa:
Waxaan abuuraa tusaha loo yaqaan joomla in / var / www:
xididka @ ubuntuS: / var / www # mkdir joomla
xididka @ ubuntuS: / var / www # joomla cd
Hadda waxaan dooneynaa inaan soo dejino Joomla. (Nooca Isbaanishka)
Waxbariddu waxay ku saleysan tahay Joomla 3.0.1 laakiin ujeeddooyinkeeda waxba isma beddelo marka loo eego nooca hadda jira, 3.0.2.
Waxaan u adeegsaday wget-ka serverka, laakiin sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa feylka kumbuyuutarkaaga iyo macaamilka FTP sida Filezilla oo feylka galiya serverka.
# tar -xjvf Joomla_3.0.1-Isbaanish-Baako_Completo.tar.bz2
Haddii aan liis gareyno liistada waxaas oo dhan ayaan heleynaa:
Kahor intaanan bilaabin rakibaadda, weli waa inaan xallino waxyaabihii kale ee hore oo aan xaqiijino qaarkood.
Waxa ugu horreeya uguna muhiimsan waa in la siiyo mudnaanta qoraalka Apache galkaas oo Joomla ay ku taal (/ var / www / joomla). Aragti ahaan, rakibaadda Joomla waa la fulin karaa, laakiin waxyaabo badan oo otomaatig ah waa inay noqdaan, sida jiilka feylasha qaabeynta qaarkood iyo kuwa kale mustaqbalka, waa inaan gacanta ku qabannaa iyadoo la isticmaalayo boosteejada waxaanan kuu xaqiijinayaa inaysan waxba qabow
Qeybinta kale sida CentOS waa inaad aragtaa sida loo yaqaan 'apache' oo nidaamka lagu garto, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay apache: apache.
Amarkan oo leh qaab dhismeed ahaan:
chown -R userX: groupX / dariiqa / waadaxa /
Marka la soo koobo, waxaan ka dhigeynaa Apache milkiilaha hagaha soo noqnoqoshada (wax kasta oo gudaha ku jira)
Kadib bogga http://www.joomlaspanish.org/ nooga dig
Noocani nidaamka shuruudaha waa sida soo socota:
diiwaanka_gloolka waa inuu banaanka (Off)
magic_quotes_gpc waa inuu dansan yahay (Off)
Midka koowaad waa mid aad u fudud in lagu hubiyo amarka:
# apt-cache siyaasada php5
Waan xaqiijin karnaa inaan haysanno nooc ka sarreeya. Iftiinka cagaaran.
Waa inaan ka raadino waxyaabaha soo socda feylka php.ini:
Waa fayl ballaadhan waxaanan kuu soo jeedinayaa inaad isticmaasho Ctrl W si aad u hesho khadadka.
Xaqiiq ahaan labaduba waxay kujireen Off laakiin ma xuma in markasta la hubiyo.
Ugu danbeyn. Waxaa la gaadhay waqtigii la rakibayay joomla.
4. Ka rakibee rakibayaha biraawsarka si aad u rakibto oo aad u habayso CMS-ga.
Si tan loo sameeyo waa inaan si fudud u dhignaa biraawsarka: Server_IP / joomla (haddii ay ku jirto galka asalka, cinwaanka IP-ga ama domainka ayaa kugu filnaan doona)
Isla markiiba markaa iyaga ayaa u hoggaamin doona biraawsarka rakibiyaha.
Waxay arki doonaan waxyaabaha soo socda waana inay buuxiyaan foomamka.
Nidaamka rakibaadda, sida aad u aragto, wuxuu ku eg yahay buuxinta saddex foom iyo wax kasta oo foomka ah »ku xigta illaa dhammaadkiisa».
Foomkan koowaad uma baahna sharaxaad:
Kaliya cadeyn, adeegsadaha Maamulaha waxaad dhigi kartaa midka aad rabto, xitaa way fiicnaan laheyd inaadan dhigin "admin" dabcanna, waa inay ku siiyaan furaha sirta ah. Isticmaalahaas ayaa ah midka ay mudnaanta aad ku maamuli doonto goobta.
Hoos waxaa ku yaal badhan aan ku habboonayn sawirka. Sida caadiga ah waa la damiyey, u daa sida tan maadaama taasi gadaal laga beddeli karo.
Badhanka xiga ee buluuga ah waxaad ku aadi doontaa foomka 2.
Foomka labaad waxaad ku arki doontaa sida wax walba oo aan u sameynay iyo phpmyadmin ay macno u sameyneyso. Waxay na weydiin doontaa isticmaale iyo xog-ururin MySQL in la isticmaalo.
Foomka 3 in ka badan foomka ayaa soo koobaya wixii aan u qaabeynay rakibaadda.
Aan aragno waxa ay ku tiraahdo si faahfaahsan. (Waxaan u kala saaray dhowr sawir si aan u muujiyo)
Waxaan calaamadeyneynaa inaan ku dhejinno xogta tusaalaha Isbaanishka.
Sidaad u aragto, ku dhowaad wax kasta oo cagaaran, raaxo aanad ku heli doonin inta badan bixiyeyaasha martigelinta. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa guji badhanka rakibida.
Waa inaan tirtirnaa galka rakibaadda, waxay la mid tahay ka saarista CD rakibaadda nidaam ka disk diskiga. Gujinaya badhanka liinta ayaa si otomaatig ah u tirtiri doona.
Si aad u tagto wejiga hore ee bogga kaliya waa inaad gujisaa badhanka "Site" iyo dhinaca dambe ee badhanka "Administrator".
Kuwa garanaya noocyadii hore ee Joomla, waxay noqon doontaa mid layaab leh in qaabka hore ee 'Frontend' iyo 'Backend' uu leeyahay waji fiican oo wiish ah.
Sidaad u aragto, wiishka wiishku waa muhiim marka loo eego noocyadii hore.
Kuwa idinka mid ah ee aan waligood la shaqeyn Joomla, ka guuritaanka hore ee dhinaca dambe waxay u fududahay dejinta domain / maamule.
Backend: Server_IP / joomla / maamule
Dhamaadka hore: Server_IP / joomla.
Waxay horeyba u heystaan ​​Joomla oo ordaya waxayna diyaar u yihiin inay ku jahwareeraan wax kasta oo ay doonayaan
Salaan kadib waxaanan rajaynayaa inaad jeceshahay casharka, xoogaa dheer laakiin leh dhammaan faahfaahinta laga yaabo inuu qofku u baahan yahay inuu bilaabo. Haddii aad ii oggolaato waxaan ka shaqeynayaa maqaal aan ku hirgeliyo qaar ka mid ah tallaabooyinka amniga aasaasiga ah ee Joomla oo diyaar noqon kara dhowr maalmood. Waxaan rajaynayaa inaanan wax badan kugu dhalan.
Macluumaad dheeraad ah: http://www.joomlaspanish.org/
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku rakib Joomla 3.0.x server-ka Ubuntu.
Waxay u egtahay qaab quruxsan 3.
Qaybta muuqaalka ah waxay qaadatay qubays wanaagsan, tan iyo markii aan ogahay Joomla (v1.5) si dhib ah uma badalin.
Waan ilaaway inaan sawiro ka dhigo gudaha dhabarka dambe laakiin hadaad aragto isla waxkastaa way ku cajabinayaan, waa la cusbooneysiiyay mid baa ku haray waji turub leh: uff, xagee ka bilaabayaa? Sikastaba, salaan.
Saaxiib Krel, waa maxay wax lagu farxo = D !!! ...
Cashar ballaadhan laakiin aad u dhammaystiran, qurux badan baan dhihi lahaa ...
Daqiiqad kahor waxaan rakibay LAMPP si aan u tijaabiyo Joomla maadaama aan haysto dhowr mashruuc oo suurtagal ah, waxaan galayaa blog-ka waana arkaa tan, waa inuu noqdaa nooc ka mid ah = D calaamadda ...
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waxaan sugi doonaa qoraalkaaga amniga ...
Haa, waa wax aad u ballaaran oo taasi waa nooca gaaban ee XD.
Waxaan kugula talin lahaa nooca 2.5 ee mashaariicda xirfadeed, oo ah LTS, waa mid aad loo safeeyey oo leh tiro badan oo kordhin, sheybaarro, iwm.
Mawduuca 3.0 waa in boodbood xiiso leh la sameeyay, inta badan muuqaal ahaan, oo ay ku jiraan bootstrap iyo naqshadeynta jawaabta ee moobiilka. Wareeg cusub ayaa bilaabmaya, laakiin weli wax yar ayaa harsan.
Sikastaba, waxaan rajeynayaa inaan helo tan xigta dhowaan. Salaan 🙂
Waxa ugu fiican ee ku saabsan nooca 3 waa in loogu talagalay daalacayaasha moobiilka.
Xaqiiqdii, shaki la'aan, hagaajinta xiddigtu waa midka aad sheegaysid, laqabsashada qalabka moobiilka.
Si kastaba ha noqotee, noocani sidoo kale wuxuu leeyahay horumarinno kale oo badan iyo hal-abuurnimo, farsamooyinka qaarkood sida darawalka PostgreSQL, jaangooyooyinka iyo joogtaynta koodhka, iyo muuqaalo kale oo badan iyo kuwa horumariya. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa in loo arkaa bilowga meerto cusub.
Aad ayaan u faraxsanahay 🙂
Ku jawaab Xaelkaz
Waad soo dhawaynaysaa, waxay ahayd wax lagu farxo.
Kadib markaan arkay KZKG ^ Gaara macno ahaan jebinta Joomla (mise waxay ahayd Drupal?), Ii aamin, waligay uma isticmaali doono CMS-kan waxyaabaha muhiimka ah. 😛
Fikradayda, xudunta Joomla waa mid aad u adag dhanka amniga. Si kastaba ha noqotee, ku xadgudubka kordhinta iyo sheybaarka ayaa sameyn kara godad waaweyn.
Laakiin sidoo kale waxay la mid tahay wax kasta oo kale, waxay ku xirnaan doontaa hirgelinta amniga ee lagu dhaqmo (labadaba serverka iyo heerka CMS), u heellan maamul ee hawshan iyo mala awaalkiisa, iyo dabcan, xirfadaha maamule. weerar. Laakiin muhiimadu waa muhiim in la cusbooneysiiyo joomla, si la mid ah sida aan u cusbooneysiino nidaamyadeena.
Ma garanayo sababta markaan u adeegsado Midori aan u helo Mac OS, ay la socoto wakiilka isticmaalaha.
Aad baad ugu mahadsan tihiin casharradan, iyada oo aan ku tijaabinayo kombuyutarka 😀
Ku jawaab Baron_Ashler
Taasi waa waxa ay ku saabsan tahay sidaa darteedna waxaan aragnaa haddii nidaamyada qaarkood la horumarin karo.
Si fudud aan caadi ahayn, waad ku mahadsan tahay waqtiga aad siisay si aad ugu sharraxdo si dhammaystiran iyo si fudud oo aan ugu dhiirranaado inaan idhaahdo qofna dhiirrigeli. Waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashadaada iyo deeqsinimadaada
Mahadsanid. Runtii way ka fududdahay sida ay umuuqan karto laakiin warqad ku dhigida ayaa shaqo qaadanaysa, waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto himilada aadka uxun ee aan naftayda u dejiyay.
Salaan ka dib aniguna waan ku faraxsanahay ammaanta.
Boostada si fiican ayey iigu adeegtay waxaanan u raacay warqadda, aad baad u mahadsan tahay, salaan!
Waxay ku timid gacanta, waxay ahayd mid aad ufudud, fasalka ayay noogu barteen hab aad u wareersan oo isku murugsan: S
Nokia weligiis dijo
Aad baad u mahadsan tahay, waxay ahayd wax aad u fudud, wax walbana si fiican ayaa loo sharaxay.
Jidka Ubuntu muuqaal ahaan waa masiibo xD
Waan ku faraxsanahay in casharradu ay kuu adeegeen, waxa ugu fiican ayaa ah in nidaamka la fahmay, ka dib foomamka iyo mid kastaaba wuu la qabsan doonaa.
NokiaForever: Waxaan u arkaa nafsad ahaanteyda mid adag laakiin baryahan dambe waxaan Ubuntu ku isticmaalayaa kumbuyuutarkeyga shaqada (in kastoo aan haysto labo kale oo leh Openuse 12.2) Waxaa laga yaabaa inay ahaan doonto maxaa yeelay waa kombuyuutar aad u awood badan laakiin waxqabadka waa la aqbali karaa, maalmo ka hor waxaan la shaqeynayay fedora18 iyo si daacadnimo leh gnome-shell markii ay sii socoto waxay ka dhigeysaa waxyaabo badan oo la doonayo. Marka qorfe inay ahaato waxay tahay, ma qabto waxqabad iyo xasilooni ay ku haboon tahay. Fikradayda, waqtigan xaadirka ah Midnimadu waa tan ugu habboon ee gtk. Iska yaree cayrsiga, waxaan kugula talinayaa kde 100%.
Aragtidayda ubuntu, waxaan marwalba ka doorbidaa rpm ka deb. Dhowr bilood ka dib markii la bilaabay waxay ku guuleysanaysaa xasillooni wanaagsan, musiibadu macno ahaan waa bisha ugu horreysa ee bilow kasta.
Waxaan u isticmaalaa Windows 8 iyo 7 kumbuyuutarkayga tan iyo markii aan doorbido Windows sababo badan awgood, laakiin Linux OS ayaa lagu rakibay sidoo kale, maxaa yeelay waan jeclahay habkaas xD, iyo waxkasta oo aad sheegtay, waxay iga dhigtay inaan isku dayo inaan furo 12.2 qaar, iyo Unity Ma jecli, waxaan doorbidaa gnome caadi ah, waxaanan ku beddelaa compiz iyo kuwa kale.
Buug aad u wanaagsan, mahadsanid. Waxa kaliya ee aan sameeyay wax walba oo si sax ah loo rakibey, waxaan arkaa joomla admind panel, laakiin markaad aragto bogga, bogga madhan ee Apache ee oranaya Way shaqeysaa wuu sii muuqanayaa, maxey taasi tahay, salaan iyo mahadsanid.
Ku jawaab kordobita
Hubi cinwaanka aad gelisay biraawsarka. Xariirka maareynta waa qeyb hoosaad ka tirsan shabakadda, si looga saaro shabakadda, meesha looga saaro qeybta maamulka.
Meel ay tahay in lagu rakibay. Haddii aad samaysay sida tusaalaha ah sida shabakadu u noqon karto IP / joomla / iyo haddii ay dhacdo haddii aad dhigto IP-ga oo keliya waxba ma jiraan, kaliya dokumentiga HTML ee xaaladda serverka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, gal / var / www / oo fiiri waxa ku qoran tusmooyinka. Biraawsarka haddii aadan wax ka beddelin apache, / var / www / waa IP, waxna ma ahan, haddii joomla lagu rakibo tiirarka hoose waa inaad dhigtaa IP / lower_directory. Waa wax yar oo jahwareer ah laakiin ma aqaano sida aan si fiican ugu sharxi karo.
maahan haddii aan horey u ogaa, haddii aan ganaax ku soo rogo guddiga maamulka oo aan galo joomla, waxaan horeyba ugu rakibay qaar badan server-ka windows-ka laakiin weligey kuma xirna Linux, waxaan ku hayaa asalka qafiska / www waxaan dhigayaa mydomain / maamule waana helayaa guddi taasna waa wax fiican, laakiin waxaan ka saarayaa maamulaha si shabakada caadiga ah loo arko oo aan loo arkin, waxay i siineysaa qaladka, ama halkii guddi joomla ah ayaan u siiyaa inaan ku arko bogga oo aan la arkin, waxaas ayaa ah Linux Ma aqaano sida ugu wanaagsan ee aan u dhaqaaqo, laakiin daaqadaha waxaan ku xallin lahaa hehehe, si fiican aan u aragno waxa la qaban karo, waad ku mahadsan tahay si kasta.
Aad u fiican casharkaaga.
Waa isla nidaamka debian.
Ku jawaab yokony
Buug aad u wanaagsan, waxaan raadinayay aalad aan ku hirgeliyo shirkadda dukumiintiyada, tani waxay u muuqataa wax cajiib ah.
Aad baad ugu mahadsantahay buugan.
Jawaab Ing. Guillermo Castro
Haye, qof ayaa awood u yeeshay inuu u haajiro goob laga sameeyay joomla, maxaa yeelay mid baan sameeyay, waxaan ku rakibay joomla 2.5.9 daaqadaha 7
Waxaan u gudbiyay daaqadaha xp, waxaan sameeyay dib u soo celin bd ah daaqadaha 7 waxaana u gudbiyay xp soo dejinta oo dhan
ka dib nuqul faylka rakibaadda joomla ee ku yaal www,
walina wax waliba si fiican ayey u shaqeeyaan si dhib la’aan ah
Waxaan rabay inaan sameeyo isla sidii oo kale laakiin ubunto, maadaama halkaas aan u baahanahay inaan ku habeeyo adeegga dhcp iyo dns, oo aan ku dhejiyo server-ka
Hawsha rakibaadda ayaan ku sameeyaa halkaas ayaan ka soo dhoofiyaa keydka macluumaadka
oo waxaan badalayaa feylasha rakibida oo kaliya iskama dulmaro faylka qaabeynta .php
oo waxaan ku xiraa bogga index.php haddii uu furmo, laakiin halkaas waxaan isku dayaa inaan ku dhex maro bogga mana furmayo mar dambe ma garanayo waxa dhaca
Waxaan siiyaa galka ugu weyn dhammaan oggolaanshaha akhriska iyo qorista, laakiin bogga aan sameeyo si sax ah looma rarin qof i caawiya ...
Jawaab ku saabsan pedro cardenas del angel
Oscar Villa dijo
Aad baad u mahadsantahay. Waxyaabo qosol badan: waa qoraalkii ugu horreeyay ama casharrada aan tallaabo-tallaabo u raaco anigoon haysan wax aan ku daro ama wax ka beddelo waxaanan helayaa natiijada la filayo. Ii aaminna inaan inbadan raacay.
Runtii aad baad u mahadsantahay aad u badan, hambalyona: waxaad dhahdaa intee in le'eg, laakiin si fiican ayey ugu qalantay, si fiican ayaa loo qoray: waad raacdaa oo waxaad leedahay joomla!
Jawaab Óscar Villa
Salaan! Marka hore waxaan rabaa inaan kuugu hambalyeeyo casharka, waa mid dhameystiran oo cad oo aan macquul aheyn.
su'aashaydu waa sababta oo ah waxaan haystay dhibaato mana aqaano sida loo xaliyo: Waxaan rakibay laambada markii aan galay ip kumbuyuutarka wuxuu soo celiyay waxyaabahan soo socda:
URL-ka la codsaday / lagama helin server-kan.
Apache / 2.2.22 (Ubuntu) Server-ka 192.168.1.101 Port 80
Ma fahmin macnaheeda iyo hadii wax walbo caadi yihiin.
ahaan xog ahaan: Waxaan awooday inaan kuqoro phpmyadmin cinwaanka IP-ga.
Waxaan jeclaan lahaa dhammaan caawimaadda suuragalka ah!
Ku jawaab manucha
Cashar aad ufiican. Aad u fudud in la raaco.
Waad salaaman tihiin .. cashar aad u wanaagsan .. wax weyn bay ii ahayd !!
Waxaan hayaa su'aal, sidee baan u abuuraa bog cusub si aanan u adeegsan faylasha tusaalaha ah?
Jawaab Hugo Garcia
Server_IP / joomla. Laakiin haddii aanan rabin / joomla inay soo baxdo oo kaliya ku shubto bogga iyada oo loo marayo IP-ga serverka, faylka qaabeynta ah ee ay tahay inaan taabto?
Jawaab Pedro Mendoza
Waan kugu hambalyeynayaa sharaxaada waxaanan aad ugu faraxsanahay sida faahfaahsan ee aad u sameysay, waxaan haystay waqti aan ku aqriyo qoraallo kale qalad rakibid ah oo aan galay darteed iyo kuwa aan la tashaday tan aad ayaan u jeclaaday maxaa yeelay halkan ayaan ka helay xalka
OK waa inaan dhahaa ... caadiyan ma dhajiyo laakiin maxaa dhacay ... Xaqiiqdii waxaan la joogay gabar turub ah waxaadna ogtahay nus qosol badan wajiga kor uqaadida maxaa yeelay taasi waa sidaan sameeyay markii aan arkay sawirada ... salaan
Buug aad u wanaagsan, wuxuu ahaa mid aad waxtar u leh oo aan wax dhibaato ah siinin, wax walba waxay shaqeeyeen markii ugu horreysay ee la raacayo talaabooyinka, mahadsanid shaqadaas
Buug aad u fiican.
Aad baad u mahadsantahay ..
guul iyo barako ..
Jawaab TiO MaKiNa
Waxaan hayaa nooca 5.5.9 ee PHP feylka php.ini ma muujinayo waxaad qortay.
Markii aan qoro localhost / joomla waxay ii sheegtaa in apache2 uusan waxba heli karin.
Go'an: Waxaan u maleynayaa inaan dib u dhaco, halkii aan joomla geli lahaa tusaha / var / www / html / joomla oo ah waxa saxda ah in la sameeyo, waxaan galiyay / var / www / joomla
Mahadsanid, waan ku cusubahay sameynta bogag websaydh ah wax badanna way i taray
Waad ku mahadsan tahay dukumiintiga faahfaahsan. Waxay shaqeysay markii ugu horeysay.
Shaki uun, khadadka lagu sheegay /etc/php5/apache2/php.ini ma muuqdaan. Waxaan u maleynayaa in horeyba loo isticmaalay oo aan loo baahnayn?. Xaaladdayda waxaan isticmaalay nooca 5.6.4 + dfsg-1
Ku jawaab aljndr
Waa salaaman tahay, macluumaad aad u fiican, si aad u wanaagsan ayaa loo sharraxay. Hadda, waxaan haystaa riwaayad markii aan dhigayay IP_Server / joomla. Waxaan helaa 404. Markii aan isku dayayo bogagga apache iyo phpadmin natiijooyinka waa kuwo wanaagsan, hase yeeshee joomla aniga aniga ima shaqeynayo. Ma ogtahay waxa ay noqon karto?
Si fudud weyn !!!!!
@krel, waan ku cusubahay joomla, ma iga sheegi kartaa dhamaan dukumiintiyada in ay jirto meesha laga bilaabayo?
Waad ku mahadsantahay soo galintaada !!!!
Waa salaaman tahay, ma ii sheegi kartaa sababta qaladkan? Waa markii iigu horreysay oo aan ka bilaabo Linux iyo Joomla.
URL-ka la codsaday / joomla lagama helin server-kan.
Apache / 2.4.10 (Ubuntu) Server-ka 192.168.0.102 Port 80
kuwa idinka ah ee qalad 404 aan la helin ah
Waxaan ku xaliyay adoo galinaya galka aan abuurnay (joomla) gudaha galka jira «html»
Waxaan ku sameeyay xumaanta; sudo nautilus (ubuntu), sudo nemo (mint), iwm ... oo waxaan ku dhaqaaqay inaan ka tirtiro feylka index.php galka "html" oo waan soo guuriyay oo aan ku dhajiyay wax walba oo ku jira "joomla" note; Waan hawlgaliyay faylalka qarsoon marka hore.
Ku jawaab asintes
Ama casharro dhammaystiran oo fudud oo aan ku arkay shabaqa ku saabsan ama isticmaalka Joomla ee aan ahayn Ubuntu server.
Inta badan obrigado by partilhar, iyo barashada timaha parabéns.
Ku jawaab Zecaspider
Diyaarinta xargaha qoraalka in lagu turjumo PoEdit iyo abuuritaanka Catalogs